आज लक्ष्मी पूजा, धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको विशेष पूजा गरिँदै आजै कुकुर तिहार पनि - Kohalpur Trends
काठमाडौँ- यमपञ्चकको तेस्रो दिन आज धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको विशेष पूजाआजा गरी लक्ष्मीपूजा गरिँदै छ ।
The submit आज लक्ष्मी पूजा, धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको विशेष पूजा गरिँदै आजै कुकुर तिहार पनि appeared first on The Buddha Khabar.
Previous Previous post: चोखो मनले देबी माताको पाउलाई छोएर दर्शन गर्नुहोस ,तपाइको मनोकामना पुरा हुनेछ …! जय माता दि !
Next Next post: होल्डिङ सेन्टर नहटाए आन्दोलन गर्ने ब्यवसायीको चेतावनी